Kooxda Juventus oo xiiseynaysa xiddig weerarka uga ciyaara Chelsea… (Miyey Blues bixin doontaa dhaliyaheeda?) – Gool FM
(Turin) 02 Dis 2020. Sida wararku ay sheegayaan Kooxda kubadda cagta Juventus ayaa xiiseynaysa saxiixa xiddig weerarka uga ciyaara naadiga reer England ee Chelsea.
Warsidaha Calcio Mercato ayaa warinaya in Weeraryahanka Kooxda Chelsea ee Olivier Giroud uu xiiso ka helayo naadiga reer Talyaani ee Juventus, kuwaaso doonaya saxiixiisa.
The Bianconeri kooxda lagu naynaaso ayaa ka fiirsanaysa inay u dhaqaaqdo soo xero-gelinta xiddigan reer France, iyagoo raadinaya inay ku daboolaan weeraryahannadooda kala ah Cristiano Ronaldo and Alvaro Morata.
Kooxda Inter Milan ayaa sidoo kale xiiseynaysa Giroud, kaasoo hoos uga dhacay safka hore ee Kooxda Chelsea bilihii la soo dhaafay.
Dhinaca kale macallinka xulka qaranka Faransiiska ayaa Olivier Giroud kula taliyey inuu isaga tago Blues haddii uusan boos joogto ah ka helaynin si uu boos kaga helo xulkiisa qaranka tartammada soo aaddan.